Facebook attacked [Security]
Myanmar IT Resource Forum » NEWS ZONE » » Hacking & Security နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ » Facebook attacked [Security]
1 Facebook attacked [Security] on 21st June 2009, 9:34 pm
Facebook ဆိုတဲ့ site ကိုတော်၂ များ၂ သိကြမှာပါ...Facebook ရဲ့ spokesman Barry Schnitt က သူတို့ Site ဟာ cleaning up damage from the attack လို့ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်...အခုတော့ attacked ခံလိုက်ရပီလေ.အရင်ကလည်း Attack တွေရှိခဲ့ဖူးပါတယ်...ကျွန်တော့်အထင် ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ အတော်ဆိုးတယ်ထင်တယ်ဗျ ..Hackers တွေက Pishing ကိုသုံးပြီးတော့ 200 million users ရဲ့ passwords တွေကို stole လုပ်သွားပါတယ်တဲ့ခင်ဗျာ...အကြောင်းစုံကိုသိချင်ရင်တော့ အောက်က Link မှာသွားဖတ်နိုင်ပါတယ်...
2 Facebook မယောင်ဆောင် Email များအတွင်း trojan ပါဝင် on 2nd November 2009, 11:59 am
Facebook မယောင်ဆောင် Email များအတွင်း trojan ပါဝင်
Bredolab လို့ခေါ်တဲ့ Trojan တစ်မျိုးဟာ email အတွင်း attachment အနေဖြင့်ပူးတွဲပါဝင်လာပြီး Facebook Password Reset Confirmation ဟူသော message ဖြင့်လှည့်ဖြားတိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း MX Labs မှတင်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ထိုလုံခြုံရေးအဖွဲ့မှတင်ပြချက်အရယခုတိုက်ခိုက်မှုဟာ The Facebook Team မှပို့လွှတ်သော Email များကဲ့သို့အယောင်ဆောင်ဝင်ရောက်လာပြီး အမှန်တကယ်မှာတော့ ထို email များဟာ လှည့်စားမှုတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
MX Labs မှတွေ့ရှိချက်အရ Email များအတွင်း Facebook_Password_4cf91.zip ဟူသော attachment ပါဝင်လာခဲ့ပြီး အသုံးပြုသူများအား Facebook Password ကိုပြောင်းလဲပေးရန် တောင်းခံစာပါရှိပါတယ်။အသုံးပြုသူဟာ ထို File အား ဒေါင်လ်းလုတ် ပြုလုပ်လိုက်ယုံဖြင့် ကွန်ပျူတာအတွင်းဝင်ရောက်ပျံ့ပွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ထိုဗိုင်းရပ်စ်ဟာ Email များအတွင်း ၀င်ရောက်ပျံ့နှံ့နိုင်ပြီး Facebook အတွင်းမှာတော့ မပြန့်ပွားနိုင်ကြောင်းထိုဗိုင်းရပ်စ်အားမည်ကဲ့သို့ ကာကွယ်ရမည်ဆိုတာကို Facebook မှသတိပေးထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
Facebook မှပြောကြားချက်အရ ၄င်းတို့အနေဖြင့် User များထံသို့ password ပြောင်းလဲပေးရန် email များလုံးဝမပေးပို့ခဲ့ကြောင်း ထိုဗိုင်းရပ်စ်ပါဝင်သော email များရရှိထားသာများအနေဖြင့် anti malware ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြုကာရှင်းလင်းနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
3 Re: Facebook attacked [Security] on 25th August 2010, 9:26 pm
Facebook is also infected by sql injection.
Some of my friends (romania hackers) got accounts by sql injections.
I thinks they got over 10000 accounts by sql injection.
Moreover, there are some hacking tools such as facebook bruteforcer, phisher, & .... on the net.
But i'm not sure the tools are worked properly or not.
4 Re: Facebook attacked [Security]